MAEVATANANA : RAVA NY TAMBAJOTRA MPANAO FAKANA AN-KERINYLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYMAEVATANANA : RAVA NY TAMBAJOTRA MPANAO FAKANA AN-KERINY
MAEVATANANA : RAVA NY TAMBAJOTRA MPANAO FAKANA AN-KERINY
Efadahy voatondro ho atidoha mpikotrika ireo trangana fakana an-keriny izay nisesy tany Maevatanàna sy ny manodidina no saron’ny Polisy, omaly. Isan’ireo tambajotra mpampihorohoro ny mponina tany an-toerana ity rava ity, raha ny fampitam-baovao voaray.
“Isan’ireo tompon’antoka tamin’ireo asa fakana an-keriny nisesy teto Maevatanàna izy efadahy ireo. Hary fitaovana ary mampiasa karazana ody gasy maro ihany koa”, hoy ny tomponandraikitry ny mpitandro ny filaminana iray any an-toerana nandritra ny antso an-tariby nifanaovana taminy.
Basim-borona dimy niaraka tamina “lampes de poche” maro ary fitaovana hafa toy ny maritoa izay fampiasan’izy ireo rehefa manatanteraka io asa ratsy io no sarona. Tsy vitan’izany fa mbola niampy ireo fanamiana mpitandro ny filaminana izay namonoan’izy ireo lolo ireo olona tazomina an-keriny ireo entana tratra ireo. Nandritra ny fifanandrinana tamin’ireo Polisy no voalaza fa nahatrarana ireto efadahy ireto, izay ao anatina tambajotra iray. Na izany aza anefa dia tafaporitsaka ny lehiben’izy ireo.
“Lesoka ny tsy fanananay fitaovana manampy amin’ny fanarahan-dia sy ny aterineto hahafahana manaparitaka haingana ny vaovao amin’ireo kaomisaria mba hanafainganana ny fanenjehana”, hoy hatrany ny fanehoan-kevitry ny Polisy iray any Maevatanàna.
Marihina anefa fa tao anatin’ny roa volana dia saika ho isan-kerinandro no nitrangana fakana an-keriny tany an-toerana. Ohatra amin’izany ireo ankizy efatra mianadahy zanaka mpikapoka vato sy ireo mpandraharaha izay tsy tafody an-trano raha tsy nandoavana volabe an-tapitrisany, ny volana oktobra teo.
Partager la publication "MAEVATANANA : RAVA NY TAMBAJOTRA MPANAO FAKANA AN-KERINY"